Simannaa WBO: 'Ajaja hayyu duree ABO fi waamicha Abbootii Gadaa kabajnee galle' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Jawar Mohammad
"Akkaa aadaa Oromootti simanne"
Ajaja hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dabarsan fudhachuun bosonaa bahanii galaa akka jiran miseensonni Waraana Bilisummaa Oromoo tokko tokko BBC'tti himan.
Obbo Taaffese Olaanaa Fiixee maanguddoo ganna 57 wayita ta'an maqaa qabsoo Daadhii Olaanaa Fiixee jedhuun waggaa 11'f miseensa WBO ta'anii dirree bosona Beegiifi Gidamii jidduu qabsaa'aa akka turan dubbatu.
Guyyaa kaleessaa kanneen Wallagga Lixaa aanaa Mana Sibuutti simataman keessaa tokko.
Deemsa miillaa sa'aatii shani oliin booda lafa itti simataman gahuu BBC'tti himaniiru.
Jili 'Gooroo Marmaaruu' maali?
Barsiisaa mooraalii waraanaafi siyaaasaa WBO akka turan kan himan Obbo Daadhiin 'qabsoon hadhaa'aadha abbaatu mi'eeffata' jechuun jireenyi qabsoo keessatti dabarsan cimaa ta'uu dubbatu.
Waamicha abbootii gadaa dhagahanii akka dhufan ibsun wamichi kun uummati keenya karaa nagaan akka qotatu akka daldaluufi akka baratu taasisa jedhaniiru.
"Utuu dhiigaa hin dhangalaasiin, utuu lafeen hin cabiin, utuu lubbuun hin badiin, gara biyyaatti deebinee qabsoo keenyaaf haala mijataa argachuun nu gamachiiseera" jechuun dubbatu.
Yeroon waan itti xiqqaateef malee looltooni heedduu galuu barbaadus jedhu.
'Ajaja Jaal Marroo jala turre'
Haa ta'u malee ajajaan zoonii lixaa Waraana Bilisummaa Oromoo galuu isaaniirraa gammachuu akka hin qabne nutti himan.
"Namootni Abbaa Gadaaf harka laattan, seenaarraa kan kaataniifi seerri kan isin gaafatu ta'usaa hubadhaa jechuun har'a ganama jaal Marroon bilbilaan ergaa nuuf dabarse" jedhu.
"Hanga kaleessa galgalaatti ajaja Jaal Marroo jala turre" jechuunis dubbatu.
Ganna 10 ol miseensa waraana Bilisummaa Oromoo ta'uun lolaa turuu isaanii kan nutti himan manguddoon biroo ganna 55 Obboo Hiikaa Batiiti.
Waamicha Addi Bilisummaa Oromoo dirqama WBO abbootii Gadaafi uummata Oromootti dabarseera jedhe miidiyaarraa dhageenyee bakka abbootiin gadaa qopheessan gara aanaa Gidaamiitti dhufne jedhu.
"Waraanni nubiraa gadi hafe baay'inaan jira, waraanni osoo fedhii qabuu hogganaa zoonii dhihaa irraa ajajni ifatti waan hin kennamneef bujunjuree, akka dhabee rakkachaa jira" jedhu.
Ajajaa zonii dhihaa waliin erga torban sadii as qunnamtii hin qabnu kan jedhan Obbo Hiikaan ammatti yaadni ajajaa kanaa maal akka ta'e baruu hin dandeenye jedhu.
Isaan garu ajajni Hayyu duree ABO irra kabajaa waan qabuuf sana dhagaahanii galuu BBC'tti himaniiru.
A.L.I bara 2008 irraa eegaluun qabsoorra akka ture BBC'tti kan hime loltuun Habtaamu Shifarraa jedhamus bifuma wal fakkaatuun labsii waamichaa Abbootiin Gadaa dhiyeessan fudhatee bosonaa Gidamii irraa galuu BBC'tti himeera.
'Hin gallu kan jedhu hin jiru'
Guyyaa har'aa Gidaamiitti miseensota waraanaa simachaa akka oolan BBC'tti kan himan walitti qabaan Gumii Abbootii Gadaa Oromoo Bayyanaa Sambatuu, Beegiifi bakka adda addaattis loltoonni simatamaa jiru jedhan.
Zoonii dhihaan alatti bakka biraa loltoonni simatamaa jiraachuu quba qabduu jennee gaafannee turre.
"Hunduu dhufaa jira, karaan fagoo waan ta'eefi wal qixxaa'ee boru ni gala jechaadha. Hin galla malee, hin gallu kan jedhu hin agarre" jedhu.
Lakkoofsa loltoota simachuuf qophaa'anii ilaalchisuun, "tilmaamni keenya kuma 10 ta'uu ni danda'a jedhanii nutti himani, sana ol ta'uus hanqachuus ni danda'a" jedhu.
Akka aadaa oromootti damma kennineefi, dhadhaa dibnee, aannan unachiifnee simataa jirras jedhan.
Wayita simataman maqaa, umurii, qabsoorra hagam akka ture, gosa meeshaa qabatee dhufee dabalatee hunduu ni galmaa'a jedhu.
Meeshaan isaan harkaa fuudhamu uummata keessaa hin bahus jedhan Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sambatuu.
Simannaa hanga guyyaa Kamisaatti jedhame fageenya lafaarraa ka'uun Jimaata dabalachuun keenya hin oolus jedhaniiru.
Mohaammad Adamoo: 'OBN cimsuuf karoora bal'aa qabna turre'